पहिला आफैं बाेलायाे, अहिले सरकार ‘हरायाे’ – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १२ गते १६:०९
‘विदेशबाट आएकालाई नलुकाउनुस्, सबैलाई खतरा हुन्छ’
सबै पालिकामा आइसोलेसन बेड तयार गर्न सुदूरपश्चिम सरकारको निर्देशन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन फोनमार्फत गरिएको आग्रहपछि हजारौं नेपाली सीमामा आइपुग्दा सरकार भने बेखबर बनेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीका स्वकीय–सचिव प्रेम कुँवर प्रख्यातले फोनमार्फत भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए।
जेठ ५ (मे १८) कुँवरलाई भारत केरलाबाट एक युवकले फोन गरेका थिए। उनलाई कुँवरले सुदूरपश्चिमेलीलाई सरकारले नाका खोलिसकेको र दुई दिनमा सयौंलाई प्रवेश गराइसकेको जानकारी दिए।
उनले अरु नेपालीलाई आउन आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न सीमानाका हुँदै दैनिक ६ हजार बढी नेपाली स्वदेश भित्रिइरहेका छन्।
यसरी भित्रिने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत नगरी घर पठाइन थालिएको छ। धमाधम भारतबाट नेपाली आउन थालेपछि परीक्षण किट अभाव हुँदा सीमामा आउने नेपालीलाई बिना चेकजाँच घर पठाइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले जानकारी गराए।
‘भारतमा कति नेपाली छन्, कति स्वदेश आउने हुन् भन्ने तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन,’ डा. अवस्थीले भने, ‘यस्तो अलमलका कारण किट मगाउन र माग गर्न समस्या भएको छ, अब आउने सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य चेकजाँचबिना घर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
घर गएका नेपालीलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएमात्रै कोरोनाको परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको डा. अवस्थीले बताए। ‘सरकारले समयमै भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरेको भए हामी त्यहीअनुसार रणनीति बनाउने थियौं,’ उनले भने, ‘तर भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च भएका वेला सरकारले नेपालीलाई ल्याउने योजना बनाएर समग्र प्रदेशलाई नै ठूलो जोखिममा पारेको छ।’
आफूहरू दिल्लीबाट दु:खका साथ आएको बताउँदै कञ्चनपुर झलारी नगरपालिका–८ बनकट्टीका हरि विष्टले सीमामा भने प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखेको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीका स्वकीय–सचिवले गरेको फोन अडियो सुनेर हामी नेपाल आयौं,’ उनले भने, ‘तर सीमामा सरकारको उपस्थिति भेटेनौं । उद्दारको त कुरै छाडौं।’
भारतमा रहेका नेपालीमाझ मुख्यमन्त्रीका स्वकीय–सचिवले बोलेको फोन अडियो पुगेको बताउँदै बझाङका नवराज जोशीले अडियोकै आधारमा लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको जानकारी गराए । ‘यतिबेला भारतमा स्वकीय सचिव कुँवरको त्यो अडियो भाइरल भएको छ,’ उनले भने, ‘भाइरल भएको अडियोको बाहिर भने मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीको तस्बिर राखिएको छ।’
प्रमुख स्वकीय–सचिव ओली भने नाका खोल्ने निर्णय संघीय सरकारमातहत रहेको र प्रदेश सरकारले भारतमा रहेका नेपालीलाई भित्रिन आह्वान नगरेको बताउँछन्। उनले फोनको अडियो फैलाएर कसैले अफवाह फैलाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनले भारतबाट आउने नेपाली नागरिकलाई प्रदेश सरकारले धनगढीमा खाना खुवाएर सम्बन्धित स्थानमा पठाउने गरेको पनि बताए।
केरलामा रहेका सुदूरपश्चिमेली र मुख्यमन्त्रीका स्वकीय–सचिव प्रख्यातबीच भएको संवादको अंश :
भारतबाट : हेलो। हजुर सर। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सर बोल्नुभएको हो?
प्रख्यात : होइन म उहाँको स्वकीय म प्रख्यात बोलेको।
भारतबाट : प्रदेश नम्बर ७ मा के छ सर, यहाँ त साह्रै समस्या छ, म केरलाबाट हो।
प्रख्यात : आउने भनिसक्यो नेपाल सरकारले, आउनुपर्यो नि, हजुर।
भारतबाट : आउने त हो, तर कसरी आउने। यहाँ त गाडी चालु भएको छैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्यो नि?
प्रख्यात : भारत सरकारसँग समन्वय गरी आउने मान्छे आएका छन्। सबै गाडी रिजर्भ गरेर आउँदैछन्। तपाईहरू पनि गाडी रिजर्भ गरेर आउनुहोस्।
भारतबाट : बम्बई, बेंग्लोरबाट पनि आउँदैछन् सर?
प्रख्यात : बम्बईबाट मेरो आफ्नै गाउँको ६०–७० जना आउँदैछन्।
भारतबाट : बोर्डर त खुला हुन्छ त?
प्रख्यात : खुला त हुँदैन तर मिलाएर पठाउँछौं।
भारतबाट : नेपालीहरूलाई आउने व्यवस्था कसरी हुन्छ ? प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्छ कि?
प्रख्यात : हुँदैन, त्यहाँ कति नेपाली छन्, १० लाख नेपाली छन्। त्यति मान्छेलाई प्रदेश सरकारले भाडा दिएर ल्याउन सक्दैन। त्यहाँबाट तपाईहरू सबै आफैंले मिलाएर आउनुपर्यो।
भारतबाट : हामी मिलाएर आउँला ? आफ्नै पैसाले आउँला ? यहाँ साथीहरू आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहन्छौं भन्दैछन्।
प्रख्यात : आउनुहोस्। आइहाल्नुस्। तपाईहरूले मिडिया हेरी हाल्नु भा‘छ। विदेशमा रहेका दाजुभाइलाई स्वदेश आउने भनिसकेको छ। त्यताबाट सबै साथीहरू गु्रप मिलाएर आउनुहोस्। यताबाट हामी पहल गरौंला।
भारतबाट : ह्वस सर, धन्यवाद।
Tags: मोहन जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेश